/ဘ‌‌လော့ခ်/ပြတိုက်/Flibanserin သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး အားလိင်ဟော်မုန်းအဖြစ်မည်သို့ကူညီသနည်း
အပေါ် Posted 11 / 11 / 2019 by ၏ ရေးသားခဲ့သည် ပြတိုက်.
လိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုယောက်ျားများတွင်တွေ့ရသည်ဟုယုံကြည်ရသည်၊ Viagra မှရွေးချယ်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ Cialisနှင့် ED ဆေးဝါးများ။ ၄ င်းတို့၏လိင်စိတ်ကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်ဟော်မုန်းကုသမှုများလည်းပြုလုပ်သည်။ အမျိုးသမီးများကဤအထဲတွင်ထွက်ကျန်ရစ်ခံစားရတယ်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, သူတို့သည်လည်းရွေးချယ်မှုရှိသည်။ လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုပြိုကွဲစေသည့်ပြlostနာဖြစ်သောလိင်ဆန္ဒများကိုသူတို့မရုန်းကန်ရတော့ပါ။ Flibanserin (167933-07-5) နှင့်အတူသူတို့သည်လိင်ဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုကိုမြှင့်တင်ရန်နည်းလမ်းရှိသည်။
နာမည်အောက်တွင်ရောင်းချသော Flibanserin (167933-07-5) Addyi အထူးသဖြင့် hypoactive လိင်အလိုဆန္ဒမမှန်ရောဂါရှိသူများအနေဖြင့် premenopausal ပြissuesနာများကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသောဆေးဖြစ်သည်။ hypoactive လိင်အလိုဆန္ဒမမှန်မှုကဘာလဲ။ ၎င်းသည်လိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာကိုပြသသည့်အပြင်၊ ဤရောဂါသည်အတူတကွတည်ရှိနေသည့်ကျန်းမာရေးပြorနာများသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးပြသနာများကြောင့်ဖြစ်သင့်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ဆေးဝါးသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပြisနာမဟုတ်ပါ။
သင်သတိပြုသင့်သည် Flibanserin သွေးဆုံးပြီးသောအမျိုးသမီးများအတွက်မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အမျိုးသားများအတွက်မသင့်တော်ပါ။ ဤဆေးကိုအထူးအစီအစဉ်အရကမ်းလှမ်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာလူတစ် ဦး သည်မူးယစ်ဆေးဝါးမ ၀ ယ်မှီဤအစီအစဉ်တွင်မှတ်ပုံတင်ရမည်။ ဤပရိုဂရမ်သည်သုံးစွဲသူများအားဤဆေးကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်အတူအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အန္တရာယ်များကိုလေ့လာနိုင်ရန်ကူညီပေးသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်၎င်းသည်သူတို့အတွက်သင့်တော်မသင့်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သည်။ ထို့အပြင်အသုံးပြုသူများသည်ဤဆေးကိုလိင်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်မှုအဖြစ်မသုံးရန်သတိပြုသင့်သည်။ လိင်ဆက်ဆံလိုစိတ်လျော့နည်းသွားသူများကိုအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲကူညီရန်ရည်ရွယ်သည်။
အမျိုးသမီးများစွာသည်ဤထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုခြင်းအပေါ်သံသယရှိကြပြီး၎င်းကိုမသုံးသင့်သည်မသေချာပါ။ အကြောင်းပြချက်, သူတို့ကအလုပ်မလုပ်စေခြင်းငှါ, သူတို့ကကြောက်နေကြတယ်။ အမှန်တရားကတော့ဒီထုတ်ကုန်ကအလုပ်ဖြစ်ပေမယ့်လူတိုင်းအတွက်တော့အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ လူတိုင်းကမတူကွဲပြားစွာတုန့်ပြန်ကြပြီး၎င်းသည်အခြားသူတစ် ဦး အတွက်အလုပ်လုပ်ခြင်းကြောင့်၎င်းသည်သင့်အတွက်အလားတူအလုပ်လုပ်လိမ့်မည်ဟုမဆိုလိုပါ။ သို့သော်ဤမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများ၏ 60% သည်အကောင်းမြင်သုံးသပ်ချက်များပေးခဲ့ပြီးဆေးသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောရလဒ်များရရှိခဲ့သည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည်။
အဓိကမေးခွန်းက, သို့သော်, ဖြစ်၏ ဤအရာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ? ရလဒ်များရရန်ဤဆေးဝါးအသုံးပြုသည့်ယန္တရားနှင့် ပတ်သက်၍ တိကျသောတွေ့ရှိချက်မရှိသေးပါ။ သို့သော်သုတေသီများသည် serotonin သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုတားဆီးနိုင်သည့်အတွက်သီအိုရီတစ်ခုထွက်ပေါ်လာပြီး Flibanserin ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။167933-07-5ဦး နှောက်အတွင်းရှိ serotonin လှုပ်ရှားမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ ၎င်းသည်အမျိုးသမီး၏လိင်ဆန္ဒကိုပြန်လည်ရရှိစေသည်။ ထို့အပြင်ဆေးသည် norepinephrine နှင့် dopamine အပေါ်သွယ်ဝိုက်သောသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ၎င်းသည်လိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများနှင့်လည်းဆက်နွှယ်သည်။
Viagra နှင့်အမျိုးသားများအတွက်အခြားလိင်ဆက်ဆံသည့်ဆေးများနှင့်မတူဘဲဤဆေးသည် ဦး နှောက်ကိုပစ်မှတ်ထားခြင်းအားဖြင့်အဓိကအားဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ သင်၏ ဦး နှောက်သည်လိင်စိတ်ကုသမှုကိုလှုံ့ဆော်ရန်အတွက်အသုံးပြုသော neurotransmitter ပမာဏကိုတိုးမြှင့်ပေးခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများကိုမြှင့်တင်ရန်တာဝန်ရှိသည့်အဓိကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခလုတ်နှစ်ခုကိုတွန်းထုတ်ပြီးအမျိုးသမီးများအပေါ်လိင်ဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုကိုနှိမ်နှင်းရန်တာဝန်ရှိသည့် neurotransmitter များကိုတားဆီးပေးသည်။ FDA ကဝယ်ယူသူများ၏ကုသမှုအတွက်၎င်းကိုအတည်ပြုပြီးနောက်ဤမူးယစ်ဆေးဝါးကို 2015 ရှိဈေးကွက်တွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည် HSDD အမျိုးသမီးများအတွက်။
ဤဆေးသည်မည်သည့်အမျိုးသမီးများအတွက်အကျိုးရှိနိုင်သည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသော်လည်း၎င်းသည်သဘာဝပျောက်ဆုံးနေသောလိင်ဆန္ဒများကိုကုသရန်အတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုအသုံးပြုသည်ဆိုခြင်းမှာအန္တရာယ်ကင်းသည်။ ဆိုလိုသည်မှာလိင်ဆက်ဆံခြင်းအတွက်အကျိုးစီးပွားဆုံးရှုံးခြင်းသို့မဟုတ်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးသက်ရောက်မှုများကြောင့်ဆုံးရှုံးသွားသောလိင်အကျိုးစီးပွားအတွက်နောက်ခံကုန်ကျစရိတ်အတိအကျမရှိလျှင်သာ၎င်းသည်အလုပ်လုပ်သည်။ ဒါ့အပြင်သူကသွေးဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အတူကိုင်တွယ်သောသူတို့အဘို့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီဆေးကို HSDD ရှိအမျိုးသမီးတွေမှာစမ်းသပ်စစ်ဆေးတယ်။ အမျိုးသမီးများသည်ရေရှည်တည်တံ့သောဆက်ဆံရေးများရှိခဲ့ကြပြီးသူတို့၏ပြproblemနာသည်မပျော်သောဆက်ဆံရေးကြောင့်မဟုတ်ဟုဆိုလိုသည်။ သူတို့သည်အတိတ်ကာလ၌လိင်ဆန္ဒပြင်းပြခဲ့ကြပြီးတဖြည်းဖြည်းပျောက်ဆုံးသွားပြီးပြန်လည်ရယူရန်နည်းလမ်းတစ်ခုရှာဖွေနေသည်ကိုစိုးရိမ်ခဲ့ကြသည်။
ဤအမျိုးသမီးများသည်ဤပြissueနာကိုငါးနှစ်ခန့်ကြုံတွေ့ခဲ့ကြရပြီးသူတို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာပါတနာများသို့မဟုတ်အခြားမည်သူ့ကိုမျှလိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများမရှိကြပါ။ 50-60% ခန့်သည်အမျိုးသမီးများသည်ဆေးဝါးကိုကောင်းစွာတုန့်ပြန်ပြီးအချို့ကမူအပျက်သဘောဖြင့်တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ အချို့ကသူတို့၏မိတ်ဖက်များမဟုတ်ဘဲအခြားသူများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒရှိကြသောကြောင့်ဆေးဝါးအပေါ်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကမည်သို့တုံ့ပြန်မည်နှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းသောအချက်အလက်မရှိပါ။
မူးယစ်ဆေးဝါးမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းသည်ရလဒ်များကိုကြည့်ရန်မည်မျှကြာသည်။ တနည်းကား, ဒီရှုထောင့်ကကွဲပြားခြားနားဓာတ်ပြုပြီးအဓိကအားကြောင့်တစ် ဦး ချင်းစီကနေအခြားကွဲပြားလိမ့်မည်။ သို့သော်စမ်းသပ်မှုများအရပထမရလာဒ်ကိုကြည့်ရန် ၄ ပတ်နှင့်အများဆုံးရလဒ်အတွက် ၁၂ ပတ်အထိကြာလိမ့်မည်ဟုအဆိုပြုသည်။ သင်မူကားရလဒ်များကိုကြည့်ရှုရန်၎င်းကိုမှန်ကန်စွာအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။
ကျွမ်းကျင်သူများကအကြံပြုထားသောသောက်သုံးသောပမာဏမှာတစ်နေ့တစ်ကြိမ်နှုတ်ဖြင့်သောက်သင့်သော 100mg ဖြစ်သည်။ အိပ်ရာဝင်ချိန်သို့မဟုတ်အနားယူချိန်တွင်အသုံးပြုလျှင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဆေးကိုအလုပ်ချိန်အတွင်းမှာ (သို့) သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကတက်ကြွစွာလုပ်နေချိန်မှာသင့်ကို syncope, central nervous system စိတ်ကျရောဂါ၊ hypotension ဒါမှမဟုတ်မတော်တဆမှုတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည့်အန္တရာယ်ရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
မင်းလွမ်းရင် Flibanserin အိပ်ရာဝင်ချိန်တွင်သောက်သုံးပါကမူးယစ်ဆေးဝါးကိုစီမံရန်နောက်အိပ်ရာဝင်ချိန်အထိစောင့်ပါ။
ဤဆေးကိုအလွန်အကျွံသောက်သုံးခြင်းသည်သင်ပိုမိုမြန်ဆန်သောရလဒ်များရရှိလိမ့်မည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ယင်းအစား၎င်းသည်သင့်အားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသာဆောင်ကြဉ်းပေးလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်မတော်တဆအလွန်အကျွံသောက်မိလျှင်သို့မဟုတ်သင်ထိုသို့ပြုသည်ဟုသံသယရှိပါကချက်ချင်းဆေးကုသမှုခံယူပါ။
မည်သည့်တိုးတက်မှုမျှမရှိဘဲအသုံးပြုရန်ရှစ်ပတ်အကြာတွင်ဤဆေးကိုသင်မသုံးစွဲသင့်ပါ။ အစောပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဆေးသည်လူအမျိုးမျိုးအပေါ်တွင်ကွဲပြားခြားနားစွာအလုပ်လုပ်သည်။ အချို့ကရလဒ်များကိုချက်ချင်းတွေ့မြင်နိုင်ပြီးအချို့သည်အချိန်ယူနိုင်သည်။ သို့သော်အနည်းငယ်တိုးတက်မှုများကိုပင်ကြုံတွေ့ရရန်သင့်အားရှစ်ပတ်မကကြာသင့်သည်။ အဲဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရင်၊ ကုန်ပစ္စည်းကသင့်အတွက်မသင့်တော်ဘူးဆိုတာပြသနေပြီး၊ အဲဒါကိုဆက်မသုံးရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။
အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးသင်သည်သင်၏ဆေးညွှန်းကို CYP3A4 inhibitors အပေါ် အခြေခံ၍ အလယ်အလတ် (သို့) အားကောင်းအောင်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် Flibanserin ကိုအလယ်အလတ် (သို့) အားကောင်းခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ အသုံးပြုပါကအကြံပြုလိုသည် CYP3A4 inhibitor ဖြစ်ပြီးနောက်သင်သည် CYP3A4 inhibitor ၏နောက်ဆုံးသောက်ဆေးမှနှစ်ပတ်ခန့်အကြာတွင်စတင်သင့်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် FLIBANSERI အသုံးပြုမှုအရ CYP3A4 inhibitor ကိုပြုပြင်လိုပါကယခင် Flibanserin ဆေးသောက်ပြီးနှစ်ရက်အကြာတွင်သင်ပြုလုပ်သင့်သည်။
သင်ဤဆေးသည်ဝယ်ယူထားသော HSSD ရှိသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ကိုဆိုလိုသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာကျန်းမာရေးပြcomplနာမရှိသောသူများအတွက်ပြtheနာဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်ပြsubstancesနာကအခြားတ္ထုများကြောင့်သို့မဟုတ်သွေးဆုံးခြင်းကြောင့်ဖြစ်သင့်သည်။ သင့်တွင်အခြေအနေ၊ ဖက်၊ နှိုးဆွမှုမခွဲခြားဘဲ HSDD ရှိပါကဤထုတ်ကုန်သည်သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်စိတ်ဖိစီးမှုများသောကြောင့်လိင်ဆန္ဒများပျောက်ဆုံးခဲ့လျှင်၊ သင်အလုပ်ရှုပ်နေပါက၊ သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်မသင့်တော်ပါကဤဆေးသည်သင်၏ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းသည်လိင်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်သည်မဟုတ်ဘဲ၎င်းသည်လိင်ဟော်မုန်းများကိုလှုံ့ဆော်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်၎င်းကိုအမျိုးသားများမသုံးသင့်ပါ။
အကျိုးကျေးဇူးများရှိသည့်အရာအားလုံးတွင်အချို့သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိသည်။ အဓိက Flibanserin ၏အားသာချက် အဲဒါကလိင် drive ကိုသိသိသာသာတိုးမြှင့်ပေးတယ်။ ၎င်းသည်သိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်စိတ် ၀ င်စားမှုကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းပြသသည့်စမ်းသပ်မှုများနှင့်အတူ HSDD ကုသမှုအနေနှင့်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ သို့သော်၊ ဆေးသည်အမြဲတမ်းထိရောက်မှုမရှိပါ၊ ၎င်းကိုသင်အားပွင့်လင်းသောစိတ်ဖြင့်အသုံးပြုသင့်သည်။ လက်ရှိဆေးသို့မဟုတ်အခြားကျန်းမာရေးသို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကန့်အသတ်များကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောလိင်ဆန္ဒကိုပျောက်ကင်းစေသည့်ဆေးဝါးအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ ဒါ့အပြင်သင်စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောသင်၏လိင်ဆန္ဒအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည့်အခြားဆေးဝါးများကိုအသုံးပြုနေပါကအသုံးဝင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်ဆေးသောက်ရန်သင့်တော်မသင့်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်သင့်ဆရာဝန်အားအရင်စစ်ဆေးခွင့်ပြုရန်လိုအပ်သည်။
အကယ်၍ သင့်တွင်နှလုံးရောဂါ၊ သွေးပေါင်ချိန်သို့မဟုတ်ဆီးချိုစသည့်ကျန်းမာရေးပြproblemsနာများရှိပါကဤဆေးကိုသင်မသုံးသင့်ပါ။ မူးယစ်ဆေးဝါးမသုံးမီပြtheနာများကို ဦး စွာကိုင်တွယ်ရန်သင့်ဆရာဝန်အားသင့်အားကူညီသင့်သည်။
အသုံးပြုရန်အတွက်ခွင့်ပြုချက်မပေးမီ၊ FDA မှစမ်းသပ်စစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုရန်အတွက်အန္တရာယ်ကင်းသည်။ သို့သျောလညျး, သူတို့အသုံးပြုရန်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိမရှိလုံးဝဆုံးဖြတ်ထားဘူးသောသူတို့အားမူးယစ်ဆေးဝါးများအကြား ADDYI ။ လိင်ဆက်ဆံလိုသောဆန္ဒများပျောက်ဆုံးနေသောအမျိုးသမီးများအားကူညီပေးသည့်ဆေးသည် Libido တိုးပွားမှုနှင့်ကူညီရာတွင်အလွန်အသုံးဝင်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။ ဒါဟာအကျိုးကျေးဇူးများအကွာအဝေးရှိသည်နှင့်အလွန်ကြီးစွာသောဆက်ဆံရေးကိုချွေတာအဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် FDA မှတွေ့ရှိချက်အရမူးယစ်ဆေးဝါးသည်အချို့သောမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုမူးဝြေခင်း၊ သူများသည်ဘုံဖြစ်ကြသည် Flibanserin ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသို့သော် FDA သည်လူတို့စိုးရိမ်ပူပန်သင့်သောသိသာသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှစ်ခုကိုစိုးရိမ်ခဲ့သည်။
အကယ်၍ အလွဲသုံးစားပြုပါကဤဆေးသည်သက်သာစေသောဆေးဖြစ်သည်။ အချို့သောသူများသည်အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာအိပ်စက်နိုင်ရန်ကြိုးစားသည့်အခါမှားယွင်းသောအကြောင်းပြချက်များဖြင့်ယင်းကိုအသုံးပြုကြသည်။ ဒီလိုဖြစ်လာရင်အသုံးပြုသူများသည်သူတို့လုပ်သင့်သည်ထက်ပိုပြီးအိပ်ကြသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၎င်းသည်၎င်းတို့၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုအဓိကအားဖြင့်အာရုံစူးစိုက်မှုမရှိခြင်းနှင့်မှားသောအချိန်များတွင်အိပ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည်အန္တရာယ်အရှိဆုံးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပြီးမူးယစ်ဆေးဝါးကိုအချိန်မတန်ဘဲအသုံးပြုသည့်အခါများသောအားဖြင့်ဖြစ်တတ်သည်။ အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအိပ်ချိန်သို့မဟုတ်အနားယူချိန်တွင်ဆေးကိုအသုံးပြုသင့်သည်။ နိုးနေချိန်သို့မဟုတ်သင့်ခန္ဓာကိုယ်တက်ကြွနေချိန်တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းသည်သွေးပေါင်ချိန်ကျစေပြီးသင့်အားမောစေနိုင်သည်။
အရက်ဖြင့်သောက်သောအခါ၎င်းဆေးသည်သွေးပေါင်ချိန်ကိုသိသိသာသာကျဆင်းသွားစေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ပြင်းထန်သောမူးဝြေခင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုနှင့်သက်သာစေသောဆေးများဖြစ်ပေါ်စေပြီးထိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကြောင့်သင်ပင်မောနိုင်သည်။ သင် Flibanserin ကိုစတင်အသုံးပြုသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်သည်အရက်ကိုမသောက်ရန်အကြံပြုသည်။ အနည်းဆုံးအရက်ပမာဏကပင်ဖော်ပြပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
အားကောင်းသောသို့မဟုတ်အလယ်အလတ် YP3A4 inhibitors နှင့်အသုံးပြုပါကသင်သည်အလွန်အကျွံသောက်သုံးခြင်းနှင့်ပိုတူမည့် Flibanserin ၏အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးလာနိုင်သည်။ ဤအရာသည်အပြန်အလှန်အားဖြင့်သင်သည်ဤဆေးကိုအလွန်အကျွံသောက်သုံးခြင်း၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုခံစားရစေသည်။ ၎င်းနှင့်အတူ၊ သင် inhibitors ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် contraindicated ဖြစ်ကြောင်းသတိပြုသင့်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်ကအခြေအနေများမှအတင်းအကြပ်ခံရလျှင်သင်သာ၎င်းကိုသုံးသင့်သည်။
ဆေးပညာကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ၏အကူအညီဖြင့်မဟုတ်လျှင်အသည်းချို့ယွင်းမှုရှိသောသူများအတွက်ဤဆေးသည်အကြံမပြုပါ။ ဤဆေးကိုမသုံးစွဲမီသင့်အသည်းပျက်စီးမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်ကူညီမည့်ဆရာ ၀ န်တစ် ဦး ထံမှအကြံဥာဏ်တောင်းသင့်သည်။ လေ့လာမှုများအရ Flibanserin (167933-07-5) သည်အသည်းချို့တဲ့သူများနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်အသည်းရှိသူများနှင့်ပိုမိုထိတွေ့မှုတိုးလာကြောင်း၊ ၎င်းတို့သည် syncope၊
ဤထုတ်ကုန်သည်ကိုယ် ၀ န်ဆောင်နှင့်နို့တိုက်နေသည့်အမျိုးသမီးများအားအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည့်ရှင်းလင်းသောလေ့လာမှုများမရှိသေးပါ။ တိရိစ္ဆာန်များအပေါ်ပြုလုပ်သောစမ်းသပ်မှုတစ်ခုအရ၎င်းသည်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေမှုသည်မိခင်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်မှုတွင်သာဖြစ်ပွားကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောကာလအတွင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုအချို့မှာကိုယ်အလေးချိန်တိုးခြင်း၊ အိပ်ချင်ခြင်းနှင့်မူးဝြေခင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။ တိရိစ္ဆာန်များသည်ပုံမှန်ထက် ပို၍ အိပ်ခဲ့ရသည်။ တိရိစ္ဆာန်အချို့သည်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာကွဲလွဲချက်များနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်အပါအ ၀ င်မျိုးဆက်ပွားခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများခံစားခဲ့ရသည်။
Flibanserin အမှုန့်လားဆိုတာကိုတော့မဆုံးဖြတ်ရသေးပါဘူး။167933-07-5) သည်လူ့နို့ကိုဖြန့်ဝေရာတွင်မည်သည့်သက်ရောက်မှုရှိသည်၊ ၎င်းသည်မိခင်နို့စို့သူငယ်များအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိမရှိကိုလည်းမသိရသေးပါ။ ကြွက်များနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာမှုများအရမူးယစ်ဆေးသည်ကြွက်နို့တွင်ထုတ်လွှတ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ၎င်းနှင့်အတူ Flibanserin ကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်သို့မဟုတ်နို့တိုက်သည့်အခါအသုံးပြုခြင်းသည်နို့တိုက်သတ္တဝါများကဲ့သို့နို့တိုက်သည့်မိခင်များအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်ပြီး၎င်းသည်မိခင်နို့စို့အရွယ်များကိုလည်းအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ဟုပြောနိုင်သည်။
လေ့လာမှုများနှင့် post-hoc ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအရဤဆေးကို hypoactive အတွက်အသုံးပြုသော postmenopausal နှင့် premenopausal အမျိုးသမီးများအရ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလိုဆန္ဒရောဂါအလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့များပါတယ်။ ကြည့်ရအောင်။ အမျိုးသမီးတော်တော်များများဟာသူတို့ရဲ့အလေးချိန်ကိုသိပြီးကိုယ်အလေးချိန်ကျစေမယ့်အရာမှန်သမျှကိုသုံးဖို့ကြောက်ကြတယ်။ ၎င်းသည် FLIBASERIN ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်လူသားများအပေါ်၌ကိုယ်အလေးချိန်တက်ခြင်းကိုမဖြစ်စေနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်သိသိသာသာအလေးချိန်လျော့ကျစေသည်ကိုသိရခြင်းကအားရှိစရာဖြစ်သည်။ သငျသညျကိုယ်အလေးချိန်ပြproblemsနာများနှင့်ရုန်းကန်နေရပြီးယင်းကိုသယ်ဆောင်ရန်မလွယ်ကူသည့်နည်းလမ်းရှာနေပါကဤဆေးသည်အပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤဆေးသည် 5-HT2C receptor အသေးအဖွဲဖြစ်သည်ဟူသောအချက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော 5-HT2C agonist သည်အဓိကအားဖြင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သည်။ FDA ကဤအချက်အတွက် FDA ကအတည်ပြုခဲ့ပြီး၊ သူတို့ကိုအလေးချိန်ရဖို့။
အကောင်းဆုံးရလဒ်များရရှိရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာသင်သာလျှင်ဖြစ်သည် Flibanserin ကိုဝယ်ပါ ယုံကြည်စိတ်ချရသောရောင်းချသူမှ။ ဤကုန်ပစ္စည်းအတွက် ၀ ယ်လိုအားမြင့်တက်လာခြင်းနှင့်အတူ Flibanserin ၏အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကိုပေးအပ်ရန်တောင်းဆိုသူများသည်မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ အချို့သူတို့သည်သင်၏အကောင်းဆုံးစိတ်ဝင်စားမှုကိုရရှိကြသော်လည်းအချို့သည်အပူတပြင်းဝယ်ယူသူများအားလိမ်လည်ပြီးမှသာဖြစ်သည်။ သင်ထုတ်ကုန်ကိုသင်အပြည့်အဝယုံကြည်ကိုးစားနိုင်သောပံ့ပိုးသူထံမှရရှိရန်သေချာစေလိုသည်။ သင်ပင်ရနိုင်သည် Flibanserin အမှုန့် နှုတ်ဖြင့်မစီမံမီသင်အဖြေရှာရမည့်နေရာ။ သင်၏အချိန်ကိုယူပြီးမှန်တယ်ကိုရှာဖွေရန်စေ့စေ့စပ်စပ်သုတေသနပြုပါ ရောင်းရန် Flibanserin။ မူးယစ်ဆေးဝါးများသည်အထိခိုက်မခံသောထုတ်ကုန်ဖြစ်ပြီးမှားယွင်းစွာရရှိခြင်းသည်သင်၏အခြေအနေကိုယခင်ကထက်ပိုဆိုးစေနိုင်သည်။
Flibanserin သည်အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲလိင်အလိုဆန္ဒပြတ်သွားသောအမျိုးသမီးများအတွက်အကောင်းဆုံးအဖြေတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။ သို့သော်သင်ဤထုတ်ကုန်၏အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကိုရရှိပြီးရလဒ်များကိုကြည့်ရှုရန်သင့်လျော်စွာအသုံးပြုရမည်။ ဒါ့အပြင်သင်က၎င်းကိုအခြားသူများအတွက်အလုပ်လုပ်သကဲ့သို့သင်အတွက်လည်းအကျိုးမရှိနိုင်ကြောင်းပွင့်လင်းသောစိတ်ဖြင့်အသုံးပြုပြီးသတိပြုသင့်သည်။ သင်ဟာသင့်တော်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ရန်ယင်း၏အသုံးပြုမှုကိုမစတင်မီဆရာဝန်၏အကြံဥာဏ်ကိုရယူရန်မမေ့ပါနှင့်။
ဂျိန်းမက္ကလာ၊ အမျိုးသမီး Viagra Flibanserin - Hypoactive လိင်ဆန္ဒဆန္ဒကိုကုသခြင်း (HSDD) နှင့်ပြင်းထန်သော Orgasm ကိုရရှိရန်နှင့်အမျိုးသမီးများ၏လိင်စိတ်ပိုမိုတိုးပွားလာခြင်းနှင့်ပြင်းထန်သော Orgasm ရရှိရန်နှင့်ဆင်းရဲဒုက္ခခံစားရခြင်းကိုဖယ်ရှားရန်လမ်းညွှန်အပြည့်အစုံ။ 1724181459
Amazon Digital Services LLC - Kdp Print Us, 2018, Pink Viagra (Flibanserin): လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုကိုမြှင့်တင်ပေးသောအမျိုးသမီးများအားအော်ဂဇင်အမြောက်အမြားအောင်မြင်ရန်ကူညီသည့်အမျိုးသမီးလိင်တိုးမြှင့်ဆေးပြားအကြောင်းစာအုပ်လမ်းညွှန်၊ ၁၇၂၉၄၇၁၁၁ ။
Borsini F၊ Evans K၊ Jason K, Rohde F, Alexander B, Pollentier S (2002) ။ "flibanserin ၏ဆေးဝါး" ။ CNS မူးယစ်ဆေးဝါးပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ 8 (2): 117-42 ။
1796 Views စာ
Oxandrolone (Anavar) အကုန်လုံးကိုမင်းသိဖို့လိုတယ် ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်သူများအတွက် Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6) မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်